I-Porn Porn ithinta ubuchopho - Isisekelo Semivuzo
Ikhaya Ama-Brain Basics I-Porn Porn ithinta ubuchopho
Ukube nje sizalwe sinencwadi yokufundisa ngalokho okusenza sithikameze! Kungasiza ngempela ukuba nesahluko sendlela i-intanethi ethinta ngayo ubuchopho. Izindaba ezimnandi ukuthi, akukephuzi kakhulu ukufunda. Yindaba eyinkimbinkimbi, kepha njengemoto, akudingeki sazi konke ngenjini ukuze sifunde ukuyishayela ngokuphepha.
Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi azifani nezithombe ezingcolile ze-past. Ithinta ubuchopho ngendlela ecacile futhi engazi lutho. Lenzelwe ngokuqondile ukusebenzisa amasu okukhonyisa kwezobuchwephesha obuhle kakhulu ukushintsha imicabango yethu nokuziphatha. Lezi zindlela zingenza abasebenzisi babe nezidakamizwa futhi baholele ekukhuphukeni kwezinye izinhlobo zobulili ezingcolile kakhulu.
Lawa mavidiyo amane amafushane achaza ukuthi kanjani. Bakhipha umuzwa wecala ngokuchaza ukuthi ingqondo itholakala kalula kangakanani ekuheheni kwalezi zokuzijabulisa ezivuselelayo. Lokhu kusebenza ikakhulukazi ebuchosheni bokuthomba. Umkhakha we-porn wezigidigidi zamarandi unentshisekelo kuphela enzuzweni hhayi emiphumeleni yengqondo nangokomzimba kubasebenzisi.
Lokhu Owokuqala ubude bemizuzu engu-5 futhi kufaka phakathi ingxoxo ne-neurosurgeon mayelana nethonya le-porn. Kucashunwa ku-documentary eyenziwe yi-New Zealand TV.
Le minithi emi-2 ekhaliphile izithombe ichaza umthelela kokungasebenzi ngocansi nolaka ebudlelwaneni.
USolwazi waseStanford psychology social uPhilip Zimbardo ubheka 'ukuvusa umlutha' kule nkulumo yemizuzu engu-4 yeTED ebizwa ngokuthiI-Demise of Guys".
"Isivivinyo Esikhulu Sokuzijabulisa"Kuyinkulumo ye-TEDx yamaminithi we-16 yothisha wesayensi wangaphambili nomlobi uGary Wilson. Iphendula inselele ehlelwe nguZimbardo. Kubonwe izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingu-12.6 ku-YouTube futhi ihunyushwe ngezilimi ze-18.
UGary uvuselele inkulumo ye-TEDx kwisethulo eside (1 hr 10 amaminithi) okuthiwa "Ubuchopho bakho ku-Porn- Yeka ukuthi i-Internet Iyithinta Ubuni Bakho“. Kulabo abakhetha incwadi ehehayo futhi efundisayo enamakhulu ezindaba zokuthola kabusha namathiphu abalulekile okuyeka izithombe zobulili ezingcolile bona uGary's Ubuchopho bakho ku-Porn: Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi eVukayo yokuMlutha itholakale ephepheni, ku-Kindle noma njenge-audiobook. Ubeka imibono eyinhloko kakhulu kulokhu okuhle kakhulu podcast (Ama-56 amaminithi).
Kulesi sigaba 'sezisekelo zobuchopho', iReward Foundation ikuthatha ekuvakasheleni ubuchopho bomuntu. Ungabheka lapha ukuthola eminye imininingwane mayelana nezisekelo ze i-anatomy yobuchopho eyenziwe yiMcGill University. Ingqondo iguqukile ukusisiza basinde futhi bathuthuke. Isisindo esingaba ngu-1.3kg (cishe ama-3lbs), ubuchopho bomuntu benza nje u-2% wesisindo somzimba, kepha usebenzisa amandla angaba ngu-20%.
Ukuze uqonde ukuthi ubuchopho buguquke kanjani ukusebenza ngokujwayelekile, bheka i ukuthuthukiswa kwemvelo kwengqondo. Ngokulandelayo sizobona ukuthi izingxenye zisebenza kanjani ngokubheka imigomo ye- i-neuroplasticity. Yileyo ndlela esifunda ngayo futhi singafundile imikhuba ehlanganisa ukuthuthukisa umlutha. Sizophinde sibheke ukuthi ubuchopho bukhuluma kanjani ukukhanga, uthando nokulala ngocansi ama-neurochemicals. Ukuqonda ukuthi kungani siqhutshelwa kule miklomelo, kubalulekile ukwazi ngesisusa sobuchopho noma uhlelo lokuvuza. Kungani i-golden age of adolescence inesiyaluyalu, imnandi futhi idideka? Thola kabanzi mayelana nalokhu ubuchopho obusha.